अमिर दोङ तामाङ चलचित्र जगतका महानायक, कतिको सहि ? - samabeshionline.com
प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७५, शनिबार २०:४७
विवेक लोप्चन , काभ्रे ।
पछिल्लो समय तामाङ चलचित्र जगतमा नयाँ अनुहार, नयाँ जोस, नयाँपन आएको हामीमा महशुश छ् । तामाङ भाषामा बनेको चलचित्रको कथा, बिषयबस्तुको हिसाबले अझ फराकिलो बन्दै गरेको हामी पाउछौ । जो कलाकारहरु तामाङ चलचित्र जगतमा आए र केही समयमा नै चलचित्र जगतलाई त्यागेकाहरु पनि धेरै छन ।
तामाङ चलचित्र जगतमा पहिलो चलचित्र “सेमरी छोराङान” चलचित्र जब ईतिहासमै पहिलोपल्ट प्रदर्शन भयो त्यसपछि थप उर्जा मिलेको थियो । यसका निर्देशक जयनन्द लामा हुन् । सुरुवाती चरणमा तामाङ भाषामा चलचित्रको बनाउनु चुनौती त थियो नै । चलचित्र बिस्तार हुँदै अघी बढ्ने क्रममा समाजमा चलचित्रबाट समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई ब्याजाउन सकिने कुरालाई उठाउदै आएको छ् ।
पछिल्लो समयमा तामाङ चलचित्रलाई नियाल्ने हो भने धेरै चेतनामुलक,शिक्षामुलक चलचित्र प्रदर्शन भैसकेको छ् । अहिलेसम्मकै अपडेटमा हेर्दा सबैभन्दा बढी तामाङ चलचित्र निर्देशन र नायकको भूमिकामा अभिनय गरेका सुपरस्टार हुन आमिर दोङ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पिन्थलीमा जन्मेका उनी तामाङ चलचित्र उद्योगमा स्थापित भई सकेका छन ।
सुरुमा चन्द्रकुमार दोङको स्वरमा सजिएको तामाङ गीत ‘तेमाल नाम्साला ङा छारि ब्योन’ मा जीवनमा पहिलो अभिनय गरेपछि तामाङ कथानक चलचित्र ‘ल्हेङ स्याला सेमजो’ देखि हालै प्रदर्शनको तयारीमा रहेकाे “ङिङ्जे” सम्म आइपुग्दा १६ वटा चलचित्रमा निर्देशन र दुई दर्जनको हराहारीमा नायकको अभिनय गरिसकेका छन् भने नेपाली भाषाको चलचित्र ‘सुर्य किरण’ बाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा समेत आफ्नो निर्देशन यात्रा सुरुवात गरेका छन । ‘आसेना लाबा गल्ती’ नामक भाषिक चलचित्रबाट निर्देशनको काम थालानी गरेका दोङ चलचित्रलाई समुदाय, व्यक्ति र समाजको एक ऐना हो भन्नु हुन्छ ।
तामाङ चलचित्र जगतमा योगदानको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि समुदायको संकार,परम्परा,भेषभुषा साथै सिङ्गो जातित्व र पहिचानलाई चलचित्रमा उतारेका दोङ्को योगदान बर्णन गरी नसक्नु छ् । आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समाजलाई प्रतिनिधित्वसमेत गरेक छन । तामाङ् चलचित्र जगतमा सङ्ख्यात्मक रुपमा बढी निर्देशन र अभिनय गरिसकेका दोङको चलचित्र बिश्लेषण गर्दा सङ्ख्यात्मक रुपमा मात्र नभैइ चेतनामुलक र समाजमा सन्देश दिने खालका हुने गरेको दर्शक र तामाङ चलचित्रकर्मीहरु बताउछन ।
चलचित्र निर्देशन,अभिनय साथै म्युजिक भिडियोमा पनि उत्तिकै व्यस्त दोङ राजनीतिक ढंगको कथावस्तुमा चलचित्र निर्माण गर्ने सोचमा रहेको बताएका छन । देश तथा बिदेशमा समेत चलचित्र प्रदर्शन गरिसकेका दोङ स्टेज शो कार्यक्रमहरुमा उत्तिकै ब्यस्त छन । तामाङ् गीत ,सङ्गित साथै चलचित्र यात्रा अघी बढाउन डम्फु मिडियाको स्थापना गरेका छन । पछिल्लो समय उहाँले स्थापना गरेका युटुब च्यानलले राम्रो लोकप्रियता हासिल गर्न सफल रहेको छ् ।
सिङ्गो तामाङ चलचित्र जगतलाई निरन्तर रुपमा अघी बढाउनको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने दोङलाई तामाङ चलचित्र जगतको खम्बा नै मानिन्छ । चलचित्रमा दिएको योगदान, चलचित्रबाट समाजमा प्रदान गरेका चेतना साथसाथै अभिनय,निर्देशनको पाटोलाई एकाएक केलाउदा सुपरस्टार आमिर दोङ्लाई तामाङ चलचित्र जगतका महानायक भन्दा केही फरक नपर्ला । कलाकारिता यात्रामा निरन्तर लागिपरेका तामाङ चलचित्र जगतका महानायक आमिर दोङ्लाई थप सफलताको शुभकामना ।
गायिका सम्झना भण्डारी को तिजको नयाँ गीत सार्वजनिक ( भिडियो सहित )
अमेरिकाद्वारा एक महिनामा एक लाख ६४ हजार रोजगारी सिर्जना
फेरियो अनुगमन शैली, प्रधानमन्त्रीले यसरी गर्छ मन्त्रालयको अनुगमन
गायिका अनिसा चौधरीको मार्मिक एल्बम ‘गुराँस फुल्यो ’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
३०० भन्दा बढी आरोही सगरमाथाको चुचुरामा
चलचित्र ‘एक्स्ट्रा माया’टेलर सार्वजनिक , गाँउ,शहर र पर्देशको पिडा समेटिएको (भिडियो सहित)
मुना थापा मगर र कमल विरहीको सुमधुर गीत ‘फुल्यो फुल सिस्नु सेतै ’ ! हेर्नुहोस् भिडियो !
किन यस्तो भने मिलानले, के उनले भने जस्तै भएकै हो त ……
वाइबा राजा र डब्ज्याङजोङ दरबारको इतिहास (एक पटक पढ्नै पर्ने इतिहास)